"Dhamaan Saaxiibbadaydii Means Wada Dhinteen..." - Andriy Shevchenko Oo – Axadle
Andriy Shevchenko ayaa daboolka ka qaaday sheeko murug leh oo ku habsatay, taas oo aanay inta badan dadku ka conflict qabin.
Shevchenko oo ka hadlay ayaa yidhi: “Toban sannadood ayaan jiray, waxa aan ku waallaa in aan kubadda ku ciyaaro meel walba, waxay i geeyeen akaademiyadda Dynamo Kiev. Kaddib waxa dhacay qaraxii dhamaantoodna approach ku dhinteen. Wali waxaan dareemayaa xanuunka, basas ka yimid Midowga Soofiyeet ayaa noo yimid, waxaanay na qaadeen carruurta ay da’doodu u dhaxaysay 6 illaa 15. Anigu 1,500 kilometer ayaan ka fogaa gurigayaga, waan xasuustaa waxay ila ahayd sidii aan filim ku dhex jiro.”
Musiibada ayuu kasii hadlay, waxaanu yidhi: “Deriskaygii approach sii yaraadeen oo yaraadeen, dhamaan saaxiibbadaydii approach dhinteen, kumay dhimanin nukliyeerka laakiin waxa dilay alkohol, doroogo iyo dhibaatooyinka hubka.”